Wasaaradda Arimaha Gudaha oo soo saartay habraaca doorashooyinka maamul gobaleedyada – Kalfadhi
War saxaafadeed Galabta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay habraaca doorashada degaanada maamul gobaleedyada dalka oo qaarkood lagu wado in ay doorasho dhacdo dhamaadka sanadkaan 2019.
Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya waxay soo saartay Sharuudo badan oo ay waajib tahay in la maro markii ay dhacayso doorashooyinka maamul gobaleedyada dalka oo ay ugu soo horreyaan Jubbaland iyo Galmudug.
Habraaca doorashooyinka oo ay soo saartay Wasaradda Arimaha Guaha Soomaaliya ayaa ka kooban 27 qodob oo Wasaaradda soo bandhigtay, kuwaasoo waafaqsan dastuurka KMG, waxaana habraacan uu qeexayaa qaabka loo qabanayo doorashooyinka iyo wadiiqooyinka sharciga ee loo marayo.
War saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay qasabtahay in waqtigooda lagu qabto doorashada oo aan maalinna lagu darin, iyadoo doorka saartay doorashooyinka ugu soo horreeyo ee Madaxweynaha iyo mid Baarlamaanka ee dowlad gobaleedyada qaar.
“Mabda’a guud ee asalka u ahi waa in la qabto doorashoyin ku dhaca hanaan dimoqraadi ah oo xor iyo xalaal ah” ayaa lagu yiri War saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya. “Wasaaradda Arimaha Gudaha waxay tahey mas’uuliyadeedu in ay ka mira dhaliso hanaanka federaaleynta iyo dimoqraadiyeenta dalka” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaliya.
Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Wasaaradda uu xil ka saaran yahay taageerada iyo garab istaagga dowlad gobaleedyada dalka ee qabashada doorashooyinka.
“Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay in ay maamul gobaleedyada ka taageerto qabashada doorashada, waa in ay dhowrtaa mudda xil-heynta iyo in ay hubiso doorasho walba oo dhacda” ayaa lagu yiri War saxaafadeedka Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya ka soo baxay maanta gelinkii dambe.
Cali Gacal "waxaan ka digayaa faragelinta Galmudug ay ku hayaan Puntland iyo Xisbiyada qaar"